Akhriso talooyin la xiriira walaaca ka dhashay Covid-19 oo af soomaali ah ah - NorSom News
Akhriso talooyin la xiriira walaaca ka dhashay Covid-19 oo af soomaali ah ah
Xarunta dowlada Norway u qaabilsan keydinka aqoonta la xiriirta xanuunada wel-welka ayaa af Luuqado badan oo Af-soomaali uu kamid yahay ku diyaarisay talooyin la xiriira wel-welka laga qaaday xanuunka Corona-virus.
Halka ka akhri(Riix): Talooyinkan oo af soomaali ah
Previous articleDadkii ugu yaraa ee 30 sano Norway magangalyo weydiista : 537 qof.
Next articleHooyo dhalinyaro soomaali ah iyo dowlada Norway oo mar kale loogu kala garqaadayo maxkamada Yurub.
Akhri Jadwalka aayar u qaadista xayiraadaha iyo sharciyada cusub oo af soomaali ku qoran.
(Daawo): Helsedirektoratet: Dadaalkaaga ayaa isbadal saameyn kara ee sii wad sameynta arrimahan
Dr. Khalid(Legevaktlege): Coronavirus qofka maku dhici karaa mar 2-aad